Rainier Ave S Jidka Baska Keliya - Transportation | seattle.gov
waxaa La cusbooneysiiyay June 27, 2022
Hagaajinta isku halaynta gaadiidka iyo wakhtiyada safarka
Horraanta Luulyo, waxaan bilaabi doonaa dhismo aan ku dareyno haad baska-kaliya dhanka waqooyi ee Rainier Ave S. Tani waxay u dhaxayn doontaa S Alaska St iyo S Walden St. Waxa kale oo aanu ku dari doonaa waddo baska-kaliya ee u dhaxaysa S Oregon St iyo S Edmunds St Jidka safarka waxa uu ka isku bedeli doonaa haadka safarka oo noqon doona haad cusub oo baska kaliya ah.
Ma jiri donaan wax isbeddel ah oo lagu samayn doono baarkinka waddada ee hadda jira, jidka dhexda ee leexashada, iyo gelitaanka xamuulka. Dhismaha ayaa la qorsheeyay inuu dhaco Julaay 8 - 10. Shaqadani waxay ku xidhan tahay cimilada wayna isbedeli kartaa. Waddadu waxay ahaan doontaa mid furan inta uu dhismuhu socdo, dadkuna waxay filan karaan in wadada la xidho mararka qaarkood. Dadku waxa kale oo ay filan karaan xidhitaanno ku meel gaar ah oo joogsiga baska ee woqooyiga Rainier Ave S ee isgoysyada S Edmunds St, S Alaska St, S Genesee St, 33rd Ave S iyo S Walden St. saacado markiiba iyo boosteejooyinka baska ee la raray ayaa la siin doonaa meel u dhow. Ka fiirso ogeysiisyada iyo isbeddellada ku meel gaadhka ah ee joogsiga baskaaga inta uu socdo dhismaha.
Waddooyinka baska-kaliya waxay caawiyaan inay basaska u socdaan si la isku halleyn karo iyagoo ka sooca basaska baabuurta kale. Waddooyinka baska-kaliya waxay yareeyaan waqtiyada safarka baska, gaar ahaan marka uu taraafku culus yahay, iyadoo la yareynayo daahitaanka taraafikga. Hadafkayagu waa inaan ka dhigno taraafikada doorasho la heli karo, habboon, oo la isku halayn karo dhammaan dadka ku nool, ka shaqeeya, iyo booqanaya Seattle Mid ka mid ah hababka aan uga shaqeyneyno hadafkaan waa in aan ballaarino shabakadeena waddooyinka baska kaliya ah si aan u abuurno hannaan tareen oo la isku halayn karo oo waxtar leh oo dad badan ku dhaqaajin kara waqti yar gudahood.
Waxaan ka shaqeyneynaa iskaashi aan la leenahay King County Metro si aan u wanaajino isku halaynta gaadiidka ee Dooxada Rainier. Marinka 7 waa mid ka mid ah jidadka basaska ugu mashquulka badan Seattle, waxayna u adeegtaa 8,000 oo rakaab ah maalintii (11,200 oo rakaab ah maalmihii kahor COVID-19). Halka marinka 7 baska loo qorsheeyay inay yimaadaan 10 daqiqiiqo ka hor, basaska inta badan waxay la daahaan cidhiidhiga taraafiga ee Rainier Ave S. Shaqadani waxay u dhici doontaa laba qaabood:
qaybta 1 (dhismaha 2022)Ku dar waddo baska-kaliya ah ee woqooyi u socda ee u dhexeeya S Alaska St iyo S Walden St, iyo waddo baska-keliya ah oo socdo konfur oo na u dhexeeya S Oregon St iyo S Edmunds St. waddada socodka waxa loo rogi doonaa Jidka cusub ee baska kaliya ah. laga saari maayo waddo baarkin ah oo haatan jira. Faahfaahin dheeraad ah ka eeg sawirada hoose.
Qeybta 2 (wacyigelinta sanadka 2022)Waxaan qiimeyneynaa isbedelo dheeri ah si aan u wanaajino isku halaynta gaadiidka iyo waqtiyada safarka, oo ay ku jiraan ballaarinta jidadka baska kaliya ee ka sii fog dhanka waqooyi ee Rainier Ave S. Waxaan fiirinaynaa mashruuca qeybta 2aad kaas oo kordhin doona waddada baska-kaliya ee waqooyi ee ka bilaabma S Walden St ilaa S Massachusetts St. waddadaan safarka waxa loo rogi doonaa waddo cusub ee baska-kaliya. Mashruucu waxa kale oo uu ku jiri karaa dhawr hagaajin oo xaga nalalka taraafikada si uu gacan uga geysto sii socodka gaadiidka iyo in taraafikada kale si hufan u socoto. Mashruuca qeybta 2aad waxa uu ku jiraa heerarkii hore, waxana aanu qorshaynay in aanu bilowno wacyi galinta bulshada hadhow sanadka 2022 si aanu u ururino jawaab celin si aanu mashruuca ugu wargelino.
Khariidadda goobta mashruuca:
eeg sawir la wayneeyey
nakhshada Qaybta caadiga ah ee waddada hada jirta (oo u eegaya waqooyi):
nakhshada Qaybta caadiga ah ee waddada mustaqbalka ah oo leh waddo baska-kaliya ah (oo u eegaya waqooyi):
Nakhshada u dhaxaysa S Oregon St iyo S Alaska St (oo ay eegayso waqooyiga):
Naqshada mustaqbalka ee waddada baska-kaliya ee u dhaxaysa S Oregon St iyo S Alaska St ( oo ay eegayso waqooyiga):
Asalkii hore ee Mashruuca:
Rainier Ave S waa waddo halbowle ah oo dadka ku xirta ganacsiyada iyo xarumaha dhaqanka ee magaalada. Sidoo kale waa waddo yar oo xamuul ah oo isku xira dadka u guuraya alaabta meelaha ay u socdaan. Rainier Ave S sidoo kale waa waddo muhiim ah oo u adeegaya dariiqyada Metro ee Degmada King 4, 7, 9, 48, 50 iyo 106. Marinka 7 baska waxa uu si toos ah ugu adeegaa dooxada Rainier ee sii kordheysa iyo bulshooyinka dhaqan ahaan aan la tixgelin lana daryeelin. Dad badan oo ku nool Rainier Valley waxay ku tiirsan yihiin mariinka 7 baska maalin kasta si ay u helaan adeegyada maxalliga ah, sida dugsiyada, dukaamada raashinka, shaqooyinka, iyo meelaha bulshadu isugu timaado. Dadku waxay sii wadeen inay ku tiirsanaadaan Jidka 7 inta lagu guda jiro masiibada COVID-19 iyo dariiqa baska ayaa ilaaliyay qaar ka mid ah tirooyinka raacitaanka ugu sarreeya inta lagu jiro aafada.
mariinka 7 wuxuu lahaa mid ka mid ah raacitaanka gaadiidka ugu sarreeya inta lagu jiro aafada. Deyrtii 2020, mariinka 7 waxa uu haystey 60% raacitaanka ka hor COVID.
Mashruucan waxa loo doortay qayb ahaan fursad oo lagu wanaajinayo isku halaynta gaadiidka iyo wakhtiga safarka ee dariiqa rakaabka oo ahaaday mid sareeya inta lagu jiro masiibada COVID-19. Maalgelintan oo hadda la samaynayo, gaadiidku waxa uu sii ahaan karaa mid la isku halayn karo oo wax-ku-ool ah oo dookh ah oo loogu talagalay dadka inta aan ka sii wadeyno ka soo kabashada masiibada.
Mashruuca waddada Rainier Ave S wuxuu ka dhisay dadaaladii hore ee wacyigelinta iyo qorshaynta si loo wanaajiyo isku halaynta gaadiidka ee Dooxada Rainier. SDOT iyo King County Metro waxay sameeyeen wacyigelin 2017-2018, iyo mar labaad 2019-2020 si ay u ururiyaan talada bulshada ee baahida gaadiidka iyo mudnaanta ee Rainier Ave S oo qayb ka ahMashruuca Khadka RapidRide R. Wacyigelintaas ayaanu ku maqalnay:
Dadku waxay rabaan gaadiid la isku halayn karo si ay u gaadhaan meelaha ay u socdaan iyo adeegyada muhiimka ah ee ku teedsan Rainier Ave S (halkii ay kaliya ugu safri lahaayeen magaalada hoose)
Taageerada safarrada gaadiidka ee qaata waqti yar oo ku xidha gaadiidka kale
Helitaanka amaanka ee dadka lugaynaya, baaskiilka fuushanaya, iyo kuwa rogmanaya joogsiyada baska (gaar ahaan isgoysyada u dhow isgoysyada baska)
Taageerada waddada baska-kaliya ee u dhexeeya Chinatown-ID iyo Saldhiga Tareenka Fudud ee Mt Baker
Dadka intooda badan waxay taageeraan soo jeedinta ah in meesha laga saaro baabuurta la dhigto wadada si loogu daro dariiqyada baska-kaliya, laakiin waxaa jira walaacyo ku saabsan saamaynta ganacsiyada yaryar
Ku darista iyo balaadhinta dariiqyada baska-kaliya ee Rainier Ave S waxay wanaajin doontaa isku halaynta gaadiidka Rainier Ave S, oo ay ku jiraan waddooyinka soo noqnoqda ee leh fuulid sare sida Waddooyinka 7, 48 iyo 106
Ku darista dariiqyada baska-kaliya hadda waxay u oggolaan doontaa taraafikada inuu sii ahaado mid nololeed oo si wanaagsan ugu adeega bulshada Dooxada Rainier inta aan si wadajir ah uga soo kabsaneyno ugana soo kabsaneyno masiibada.
waddooyinka baska-kaliya ayaa si habsami leh ugu xidhi doona dadka baska saaran saldhiga cusub ee Judkins Park oo furmaya 2023, marka lagu daro xarumaha tareennada ee jira sida Saldhiga Tareenka ee Mt. Baker Light iyo Saldhigga gaadiidka McClellan.
Rainier Ave S waxa ay bixisaa adeeg bas oo soo noqnoqda subaxii inta lagu jiro xilliga AM ee ugu sarreysa, iyadoo bas dhanka waqooyi u socdaa ku imanayo 3.5 daqiiqo kasta. Waddooyinka baska-kaliya ayaa ka caawin doona dad badan inay gaaraan halka ay ku socdaan waqtiga- oo ay la kulmaan waqtiyo safar oo joogto ah. Inta lagu jiro celceliska safarka subaxda, dadka baska saarani waxay iska dhimi karaan 2 daqiiqo ka dib marka la rakibo waddada baska-kaliya. Inta lagu jiro safarrada subaxda ee ugu ciriiriga badan, dadka baska saarani baska-kaliya waxay dhimi karaan 6 daqiiqo.
Waxaan filaynaa in mashruuca qeybta 1aad uu dhimi doono in ka badan 1 daqiiqo dadka baska u socda woqooyiga ee u dhexeeya S Alaska St iyo S Walden St. Waxaan filaynaa in xitaa kayd badan oo wakhtiga safarka ah annagoo siinaynayna waddada baska kaliya ee woqooyi ka sii socda I-90 halkaas oo tirada taraafiggu aad u badan tahay, cidhiidhiga na way badan tahay.
Wax badan ka baro Rainier Ave S jidadka baska-kaliya
Intee in le'eg ayay basasku dhimi doonaan waqti ka dib marka la dhiso waddooyinka?
Waxaan filaynaa in dhamaystirka mashruuca qeybta 1aad uu dhimi doono in ka badan 1 daqiiqo dadka saaran baska u socda dhanka woqooyi ee u dhexeeya S Alaska St iyo S Walden St. Waxaan filaynaa in ay jiri doonto kayd waqti ka sii badan haddii waddo baska-kaliya la dheereeyo woqooyi dhanka I-90 halkaas oo tirada taraafikada ay ka sarreyso saxmadduna ay inta badan ka weyn tahay. Waxaan sii wadi doonaa inaan qiimeyno hababka waqtiga dhimaya taasoo qayb ka ah mashruuca qeybta 2
Maxaad hadda loo sameenayaa waddooyin baska-kaliya?
Mashruucan waxa loo doortay qayb ahaan fursad oo lagu wanaajinayo isku halaynta gaadiidka iyo wakhtiga safarka ee dariiqa rakaabka oo ahaaday mid sareeya inta lagu jiro masiibada COVID-19. Iyada oo la samaynayo maal-gashiyadan hadda, gaadiidku waxa uu sii ahaan karaa mid la isku halayn karo oo dookh u ah dadka inta aan ka sii wadeyno ka soo kabashada masiibada.
Ma jiraan wax saameyn ah oo baabuur dhigashada ah?
Ma jiro baarkin hadda jira oo laga saarayo mashruuca qeybta 1. Wax kasta oo saameyn ku leh baarkinka wadada ee mashruuca qeybta 2 ayaa la go'aamin doonaa iyadoo qorsheynta iyo naqshadeynta mashruuca ay sii socoto.
Helitaanka meheradaha iyo/ama guryaha ma isbedelayaan?
Maya, gelitaanka meheradaha iyo/ama degaannada Rainier Ave S waxba iska beddeli maayaan mashruuca qeybta 1aad. Dadka baabuurka wada waxay wali awood u yeelan doonaan inay galaan dariiqyada baska kaliya si ay u maraan isgoysyada ama ganacsiyada/deegaanada. Isbeddel kasta oo xaga gelitaanka ah oo ku yimaadda mashruuca qeybta 2aad ayaan weli la go'aamin.
Waa maxay saamaynta ay ku yeelan karaan dadka wada baabuurta iyo kuwa xamuulka?
Ma fileyno in ay saameyn weyn ku yeelan karto wakhtiga safarka dadka wada baabuurta iyo kuwa xamuulka qaada kadib marka la dhiso mashruuca qeybta 1aad. Iyada oo qayb ka ah mashruuca qeybta 2aad, waxaan sii wadi doonaa inaan barano saameynta suurtagalka ah ee dadka wada baabuurta iyo gawaarida waxaanan ka shaqeyn doonaa sidii aan u aqoonsan lahayn xeeladaha lagu maareeyo ama lagu yareeyo saameyntaas.
Sideed wax uga qabanaysaa taraafikada xaafadaha ku xiga?
Waxaan fahamsanahay in dadka qaarkii ay baabuur wadaan ay dooran doonaan inay maraan waddooyin kale oo ka mid yihiin xaafadaha la deggan yahay si ay uga fogaadaan waddooyinka ciriiriga ah. Marka la eego tirada taraafik ee hadda jirta, ma fileyno in ay jiri doonto leexin taraafikada ah (ama dadka dooranaya in ay qaataan wadooyin kale) mashruuca qeybta 1.
Waxaan ognahay in u wareejinta safarro badan oo ku-meel-gaar ah ay muhiim u tahay:
caawinta dad badan inay ka faa'iidaystaan ​​nidaamka gaadiidka la isku halayn karo
Caawinta in la yareeyo saamaynta leexinta taraafikada ee xaafadaha deegaanka
Waxaan samayn doonaa wacyigelin dheeraad ah 2022 marka aan horumarinayno mashruuca qeybta 2aad si aan si wanaagsan u fahanno sida aan wax uga qaban karno caqabadaha dadka raaca gaadiidka. Iyadoo qayb ka ah wacyigelintaas, waxaan sidoo kale qorsheyneynaa inaan dhageysanno bulshada deegaanka si aan si wanaagsan u fahanno:
Welwelka iyo xeeladaha suurtagalka ah ee aan hirgelin karno si aan u niyad-jabinno gooynta taraafikada
Xeeladaha lagu caawinayo dad badan inay u guuraan safaro badan si u maraan ama u safraan wakhtiyada cidhiidhiga yar ee maalintii si ay wadooyinku u sii bannaadaan marka dadku u baahan yihiin inay baabuur wadaan
Rainier Ave S waa waddo muhiim u ah dadka baaskiil ka wadda. Maxaa horumar ah oo aad samaynaysaa si loo hagaajiyo xaaladaha dadka baaskiilka?
Waxaan maqalnay in Rainier Ave S ay tahay waddo muhiim u ah dadka baaskiilka wadda sababtoo ah inta badan waa waddo fidsan oo toosan. Rainier Ave S sidoo kale waa waddo muhiim ah oo inta badan loo isticmaalo gaadiidka, xamuulka, iyo baabuurta kale. Waa in aan dheellitirnaa baahiyahan iyo mudnaanta siinnaa marka aan go'aan ka gaareyno isbeddellada ku saabsan waddada iyo bannaanka saxda ah ee jidka. Ilaa hadda, waxaan maqalnay in labada arin ee ugu sarreeya bulshada ee Rainier Ave S ay yihiin in la yareeyo shilalka iyo in la sii wado socodka basaska.
Dadka baaskiilka wata waxaa loo oggol yahay inay ku safraan dariiqyada baska-kaliya ee gees ka si waafaqsan Sharciga Gobolka Washington. Dadka baaskiilka ku dhex wata dariiqyada baska ee dhinaca gees ka gees ah waa inay xusuustaan in basasku ay inta badan samayn doonaan joogsi haad ah oo ay si taxadar leh u safraan. Sida uu qabo sharciga gobolka, cid kasta oo horaysa ayaa mudnaanta leh.
Halka jidadka baaskiilka aan hadda loo qorsheyn Rainier Ave S, sidoo kalena aan lagu darin qorshaha baaskiilka, waxaanu ku samaynaynaa isbedelo kale Rainier Ave S oo wanaajin doona xaaladaha dadka lugaynaya, baaskiilka kaxaysanaya, iyo rogrogmada. Qaar badan oo ka mid ah horumarintan ayaa lagu dhisay mashaariic kale oo u dhow oo ay ku jiraan Waddada mariinka 7 safarada kala duwan. Qorshaha Baaskiilada ee 2014 wuxuu ku talinayaa dariiqyada baaskiilka ee la ilaaliyo ee Rainier Ave S waqooyiga Mt Baker Blvd. Markaan qiimeynayno ikhtiyaarrada lagu ballaarinayo baska kaliya ee ka sii fog dhanka waqooyi ee mashruuca Wajiga 2, waxaan sameyn doonnaa wacyigelin dheeraad ah si aan u fahamno sida dadka ku nool, ka shaqeeya, iyo kuwa ku safraya Rainier Ave S ay hadda u isticmaalaan waddada iyo sida ay dadku rabaan inay u isticmaalaan mustaqbalka.
Sanadihii ugu dambeeyay, waxaan ku samaynay isbedelo kale Rainier Ave S si loo hagaajiyo xaaladaha iyo badbaadada Rainier Ave S, oo ay ku jiraan hoos u dhigista xadka xawaaraha ilaa 25 MPH, rakibiddacalaamadaha dadka lugeynaya, iyo dhisidda tallaabooyin kale oo badbaado iyo dejin taraafikada ah oo qayb ka ah mashruucaHorumarinta Rainer Ave
Waxaanu u samaynay ama aanu hagaajin ku samaynay waddooyinka kale ee u dhow dadka baaskiilka wada, oo ay ku jiraan:
Jidka cagaaran ee xaafadda Rainier Valley
Waddooyinka baaskiilka ee la ilaaliyo ee Martin Luther King Jr Blvd S
Xog uruurinta Sida loo sameeyo harada Washington Blvd si baaskiilka lagu waddo
Horaanta 2022:Dhamaystir Nakhshada oo bilow wacyigelinta mashruuca qeybta 1
Bartamaha-2022: Dhismaha Mashruuca qeybta 1aad
Bartamaha-2022: bilow wacyigelinta mashruuca qeybta 2
2023-2024:Nakhshad kama dambays ah iyo hirgelinta mashruuca qeybta 2
Waddada mariinka 7 safarada kala duwan
Hagaajinta waddada Rainier Ave
Mashruucan waa suurtogal in lagu mahadiyo boqolkiiba 80 codbixiyayaasha Seattle ee ansixiyeyCabirka Gaadiidka Seattle (Soojeedinta 1) Bishii Noofambar 2020, kaas oo u abuuray dakhli joogto ah, la isku halayn karo, adeegga baska la heli karo ee magaaladeena. Iyada oo loo marayo 0.15% canshuurta iibka (oo u dhiganta 15 senti marka iibsiga tahay $100) waxaad si toos ah u taageereysaa marin u helka bulshadaada.
Agabka mashruuca ayaa halkan lagu wadaagi doonaa sida loo horumariyay.
Factsheet (June 2022)
Hel wararka Mashruuca
Isdiiwaangeli si aad u hesho wixii ku soo kordha iimaylka